Kugadzirira Njodzi Dzinongoitika Dzoga: Iyo Pamberi neKutevera
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » chengetedzo » Kugadzirira Njodzi Dzinongoitika Dzoga: Iyo Pamberi neKutevera
Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Hospitality Industry • Hotera & Resorts • nhau • Resorts • chengetedzo • ushanyi • Tourism Kutaura • Trending Now • USA Kuputsa Nhau
Gore rapfuura, 2020, raive risiri chete gore rekutanga reCVID-19 denda, asi rakaonawo kusimuka kwemadutu makuru nedzimwe njodzi dzinongoitika dzoga dzakadai semoto wesango kutenderera pasirese.
Gore ra2021 ratidzidzisa zvakare kuti zvinhu zvinogona kugara zvichitowedzera. MuUnited States, New Orleans nemaguta mazhinji ekushanya ari pedyo neGulf Coast akaparadzwa neimwe yedutu rakaipisisa pasi rose.
Kumadokero, moto wesango wakavhara zvikamu zveLake Tahoe inozivikanwa pasi rese.
Dzimwe nzvimbo dzenyika dzakatamburawo muEurope Girisi yakaona mwaka wayo wakaipisisa wesango, uye nyika zhinji dzeEurope dzakatambura nemafashama makuru.
Izvi zviitiko zvemamiriro ekunze zvinofanirwa kunge zviri zvekumutsa kune wese ari muindasitiri yekushanya. Amai zvakasikwa zvakaburitsa pachena kuti kufamba & kushanya indasitiri isina kusimba. Iyo indasitiri iyo inowanzo kuve inoenderana nemamiriro ekunze.
Kazhinji, hupfumi hwekushanya uye purofiti zviri panyasha dzezviitiko zvakasikwa. Semuenzaniso, Central America neCaribbean zvinowanzove munyasha yemwaka wedutu. Munharaunda yePacific, aya mahombekombe egungwa akakonzera, anowanzozivikanwa semadutu, anouraya zvakaenzana. Mune zvimwe zvikamu zvezwi, pane zvinyorwa uye mafashama, kudengenyeka kwenyika uye tsunami uye idzi dzinonzi njodzi dzinongoitika dzoga dzinogona kukuvadza zvisingaverengeki kune indasitiri yekushanya. Pashure penjodzi yechisikigo kune vazhinji vari muindasitiri yekushanya, kupora kunononoka zvinorwadza uye nemabhizinesi akatarisana nekubhuroka uye vanhu vari kurasikirwa nemabasa. Nekuda kwe COVID-19 denda mabhizinesi mazhinji haakwanise kupfuura kare kupora zviri nyore kubva kunjodzi yechisikigo. Nehurombo, hatigone kudzora mamiriro ekunze kana mamiriro ekunze, asi izano rakanaka kugadzirira kudengenyeka kwenyika, chamupupuri nemadutu / madutu kana moto wesango zvisati zvaitika.
Kuti ndikubatsire kugadzirira ini ndinopa anotevera mazano.
-Gadzira zvirongwa zvisati zvaitika njodzi. Kumirira kusvikira dutu raparadza kunonoka kutanga kuita. Gadzira chirongwa che-pre-emergency. Urongwa uhu hunofanirwa kuve hwakawanda uye hunofanirwa kusanganisira kuchengeta avo vanogona kukuvadzwa kana kurwara panguva yedambudziko, kutsvaga pekugara kune vashanyi, kuona kuti ndiani uye asiri kugara kumahotera, achigadzira nzvimbo dzekutaurirana.
-Funga nezve chirongwa chekudzorera bhizinesi uye chirongwa chekushambadzira njodzi isati yaitika. Paunenge iwe uri pakati penjodzi yechisikigo iwe unenge wakabatikana zvakanyanya kuti ugadzire tsime mukati mekugadzirisa hurongwa. Tora nguva yekuronga kana zvinhu zvisina kugadzikana uye uine moyo murefu uye nguva yekudyidzana nevamwe vakaita semadhipatimendi emoto, madhipatimendi emapurisa, vakuru vehutano, uye nyanzvi mune manejimendi manejimendi. Svika pakuziva vanhu ava nemazita uye uve nechokwadi chekuti vazive kuti ndiwe ani.
-Gadzira hukama hwakanaka hwekushanda pakati pemabhizimusi akazvimirira nemasangano ehurumende. Njodzi isati yaitika, ita shuwa kuti uzive mazita evakuru vehurumende vaungangoda kuenda kwavari. Enda pamusoro pezvirongwa zvako nevanhu ava uye uwane zvavanoisa pamberi penjodzi.
-Usakanganwa kuti njodzi dzinowanzo kuve mikana yekupara mhosva. Ita shuwa kuti dhipatimendi remapurisa chikamu chehurongwa hwenjodzi, kwete chete kubva pakuona kwekuchengetedzwa kwemutemo asiwo kubva pakuona kwehukama neruzhinji uye kugadzirisa hupfumi. Zvinotaurwa nedhipatimendi rako remapurisa uye maitiro ainoita kune vashanyi zvinogona kukanganisa kupora kwako uye indasitiri yekushanya yemuno kwemakore anotevera.
-Gadzira kutaurirana kwakanaka pakati pekutanga vanopindura vamiririri. Vazhinji vevashandi vezvekushanya vanongofungidzira kuti kune hukama hwakanaka hwekushanda pakati pesangano rakasiyana rehurumende, renyika, rematunhu kana renharaunda. Kazhinji izvi hazvisizvo. Interagency noncooperation inoratidza zvisirizvo pane rako rekushanya bhizinesi kana nharaunda. Semuenzaniso, Pamusoro pezvo, mazhinji mapurisa mapurisa haana kudzidziswa kuita mapurisa anokoshesa zvekushanya uye havana zano rekuti vangabata sei zvinodikanwa zveindasitiri yezvekushanya panguva dzenjodzi.
-Gadzira protocol yekutarisa ruzivo rwakatsanangurwa. Semuenzaniso, kana zvikaitika zvechimbichimbi, mahotera achabatana here pakubvumidza mazita evashanyi kusunungurwa? Kana zvirizvo, pasi pemamiriro api ezvinhu? Zvinyorwa zvehutano zvinofanirwa kuburitswa riini uye nderipi basa reindasitiri yemuno yekushanya maererano nehupombwe zvichienderana nenyaya dzehutano hweveruzhinji?
-Kuvandudza zvibvumirano zvekuchengetedzwa. Munguva dzenjodzi, mhando dzese dzekuregererwa zviri pamutemo dzinogona kudikanwa. Kana njodzi yaitika, zvakanyanyisa kunonoka kutanga kugadzirisa nyaya dzepamutemo. Gadzira rondedzero izvozvi uye uwane mvumo inodiwa panguva yekudzikama. Nenzira imwecheteyo, enda nevanhu vako vehutano kuti ndeapi marongero achave aripo kana mutemo wezve triage uchifanira kuzadzikiswa.
-Munyika ino irikurarama nedenda, zvakakosha kuti vemo vezvekushanya vemunharaunda vagadzire vashanyi marongero ehutano hweveruzhinji uye vazivise. Kana pakaitika mafashama, kudengenyeka kwenyika kana dzimwe njodzi dzinongoitika dzoga mhando dzese dzematambudziko nyowani dzinogona kumuka. Vashanyi vanogona kunge vakarasikirwa nemushonga uye vasingakwanise kuwana vanotsiva, vamwe vanhu vangangoda kuti mamwe matambudziko ekurapa ave chikamu chevanhu. Vashanyi vanozove nematanho epamusoro ekuzvidya moyo kupfuura dai vanga vari kumba uye isu tinogona kutarisira kuona akakura mazinga ezvinetso zvinokonzerwa nekushushikana.
-Ziva kana uve nehurongwa kana indasitiri yako yekushanya ichifukidza dunhu kana nzvimbo dzakasiyana-siyana. Pese pazvinogoneka, gadzira kodhi yekuzvibata uye hukama hwekushanda pakati pemasangano, mahotera, maresitorendi, dzimba dzekukurumidzira, uye mamwe masangano eruyamuro anoyambuka guta, dunhu, matunhu kana nyika miganho.
-Iva nechokwadi chekuti iwe une yakanaka isingabhadharwe nhare kana internet sevhisi uye kushambadzira uko vashanyi vanogona kuenda kunoshandisa izvi masevhisi kana kudzima magetsi. Vashanyi vanozoda kudaidzira uye vadiwa vavo vachada kuvadaidza. Nokukurumidza sezvazvinogona, gadzira imwe nzira yekutaurirana pachena. Vashanyi havazombokanganwa chiito ichi chekugamuchira vaeni.
-Tanga marefu-marefu ekushanya ekudzosera zvirongwa ipapo ipapo. Aya marefu-mapurogiramu anofanirwa kuenda kure kupfuura kungotengesa nzvimbo kana kupa mitengo yakaderera. Chirongwa ichi chinofanira zvakare kusanganisira zvinhu zvakadai sekushanda pamwe nevashandi vehutano hwepfungwa uye nekumisikidza nzvimbo dzekutsigira vashanyi vanove vapukunyuka. Kana mushanyi akasiya nzvimbo yakakanganiswa, iye acharamba achitambura nenjodzi yechisikigo. Tora mazita, email kero uye nhamba dzenhare uye ita shuwa kuti vashanyi vako vanogashira yekutevera mafoni. Aya mafoni haatombofanirwe kutengesa chero chinhu asi ingoita kuti vashanyi vazive kuti yako agency inovaitira.
Iye munyori, Dr. Peter E. Tarlow, ndiye Co-sachigaro we World Tourism Network uye inotungamira iyo Yakachengeteka Tourism chirongwa.